Xiisado ka taagan Jubbooyika iyo Isgaarsiintii oo hawada ka maqan |
Xiisado ka taagan Jubbooyika iyo Isgaarsiintii oo hawada ka maqan
Dhoobley (NogobNews) 10/12/2011 Dhaq dhaqaaq ciidan oo aad u balaaran ayaa laga dareemayaa deegaano ka tirsan gobolada Jubbada hoose, iyadoo dhinaca kale ay hawada ka maqanatahay Isgaarsiintii deegaanadaasi.
Deggmooyin iyo deegaano ka mid ah gobolka Jubbada hoose ayaa waxaa la sheegayaan inay ka taagan yihiin xiisado colaadeed iyo abaabul ciidan oo u dhaxeeya ciidamo ka kala tirsan dowladda KMG Soomaaliya iyo Xarakada Al Shabaab.
Wararka waxaa ay sheegayaan in deegaanada iyo degmooyinka laga dareemayo colaada ay ka mid yihiin Taabta, Haawina, Dhooblay Afmadoow iyo kuwa kale oo ka tirsan gobolka Jubbada hoose.
Macadda sababta ka dambeysa dhadhaqaaqa ciidan oo ay labada dhinaca sameysanayaan, hase ahaatee dadka deegaanka ah ayaa arintaani la xiriirnayo qaraxii miino ee shalay ciidamo ka tirsan dowladda KMG lagu eegtay meel u dhow Dhooblay oo ay ku geeriyoodeen 8 askari.
Isgaarsiinta deegaanada ay xiisado ka jirto ayaa waxaa la tilmaamay in ay jaran tahay taasi oo aan la ogeyn cidda ka dambeysa, iyadoo dadka deegaanka ay cabsi muujinayaan.
Majiro wax war ah oo kasoo baxay dhinacyada ay xiisaddu u dhaxeyso ee Al Shabaab iyo dowladda KMG Soomaaliya, hase ahaatee labada dhinaca ayaa mudooyinkii dambe guulo ka kala sheeganayey dagaalo halkaasi ka dhacay